MAXAA AAN Wax Akhrin, LAAKIIN DAREENNIMO U eg Akhris? ⋆ Wararka: Farshaxanka, Safarka, Naqshadeynta, Teknolojiyada
Bogga ugu weyn Entertainment Buugaag
MAXAA MA AH Akhriska, laakiin DAREENNU Waxay jecelyihiin akhriska?
Bookshop.org: la kulan ninka qaata Amazon
Some Of 2020’s Music Books To Consider
Buugaagta ii qaabeeyey: Zaina Arafat
Haddii aad maalmahan ku jirtay barta Twitter-ka, waxaad u badan tahay inaad aragtay "MAXAY AHAN ____ laakiin DAREENO u eg ______?" meme. Tusaale ahaan:
Dabcan, annaga waxaan Buugga Rabbayaashayaal aad u naqaannay arrimaha FEEL ay jecel yihiin barashada laakiin nasiib darro ma ahan. Waxaan ku noolahay jiritaanka buugga 24/7, laakiin taasi macnaheedu maahan inaan markasta runti nahay, waad fahantay… baro. Hadday noloshu tahay mid si gaar ah dhib u leh (oo aan loo malaynaynin sababta ay taasi u noqon karto) ama aan si fudud waxoogaa yar u yaraynno, sida caadiga ah waxaan dooneynaa inaan ku nuuxnuuxsanno mala-awaalka ah inaan akhristaha nahay oo aan dhex dhigno shaqada howsha nuxurka qoraalka ama buugaagta maqalka ah. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo badan oo aan nacasnimo nafteenna ah ugu dareemeyno sida inaan wax u baranayno oo aan ka helayno bogag. Malaha waad ku baratay is-khiyaanadan! Waa kuwan qaar ka mid ah arrimaha aan ugu jecel nahay in la sameeyo FEEL sida wax barashada, laakiin maahan.
Maanta Buug-gacmeedka Buugaagta
Saxiix sida ugu badan Maanta Buugaag si aad maalinba maalinta ka dambeysa uga hesho macluumaad buugaag iyo waxyaabo badan.
Waad ku mahadsan tahay isdiiwaangelinta! Isha ku hay sanduuqaaga sanduuqa.
Markaad saxiixdo waxaad u hoggaansameysaa tanyada weedho adeegsi
Ma jiraan wax la mid ah rogrogmada iyadoo la adeegsanayo sawirro caddaalad ah oo buugaag ah si loo caddeeyo aqoonsigaaga inaad tahay Qof Buug ah oo runtii dibadda wax ka baranaya. Waxaa jira tayo sare oo dhex dhexaad ah oo loogu rogayo barta 'Instagram' oo laga yaabo inay ku dayan karto in meel khaldan lagu dhigo ebook, iyada oo dib looga xumaado mid ka mid ah weedhahan xiisaha leh. Buug-gacmeedka ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad daahfurto buugaag cusub oo xitaa aad leedahay dhaliil - haddii ay dhacdo inaad runtii baranaysid qoraalka. Fursadda ayaa ah, waxaad si fudud u dooneysaa sawirrada saxda ah. Taasina waa caadi! Maxaa yeelay dareemo sida inaad wax baranayso.
Abaabulida Goodreads-kaaga ama Hilibbada dusha
Mararka qaarkood waxaad jeceshahay inaad u gudubto aagga kormeerka bandhig, laakiin waxaad dareemeysaa cillad la'aan, dambi culus oo ay tahay inaad barato. Khiyaamee maskaxdaada adoo u wareejinaya daboolka ebook wareega muuqaalkaaga! Xaqiiqdii, run ahaantii adiga kuugu adeegi meyso adiga oo adeegsanaya TBR-gaaga, laakiin waxay dareemeysaa buug kasta oo wax soo saar leh. Ku dar armaajooyin dheeri ah koontadaada 'Goodreads'! Waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin in lagu kala saaro taariikhda bilaabista? Maxaa diidaya! Waxaana ugu wanaagsan in la hubiyo in buugaagtaada Kindle ay ku jiraan fayl qaab iyo nooc-hoosaad iyo nooc-hoosaad ah.
Abaabulida Daryeelkaaga Jirka
Waxaad jeclaan laheyd inaad dib u dhigto barashada shaashadda-la'aan, taasna sidoo kale way shaqeysaa! Qolalkaaga buuggaagta lihi miyaanay rabin nadaafad? Miyaanay sannado ahayn sababta oo ah iyagaad boodhka ka dhigtay? Miyaanay jirin buugaag si xeel-la-aan ah loo sooxushay oo ay tahay in si hagaagsan loo dhigo? Waxay u badan tahay inay tahay waqtigii dhammaan buugtaada laga soo saari lahaa golahaaga oo dib loo abaabuli lahaa. Waad ku samayn kartaa iyaga midab ama fasallo qaabka idiosyncratic ah. Waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin in lagu xijiyo amarka Maktabadda Golaha Koongareeska. Dabcan, marwalba waxaa jira farsamada aasaasiga ah ee badhitaanka bartamaha lagamana afmeero tiro kabineto ah cinwaano si taxaddar leh loo abaabulay iyo inta ka hartay buugaagtaada oo lagu rido meelkasta oo guri yaal. Haddii aad u malayn lahayd inaad dhammaantood ka dhigtay sida ugu fiican ee caaradda, in kastoo, ha iloobin inaad muddo qaadato si aad u bogaadiso abaabulkaaga cusub. Si kastaba ha noqotee, waad hubi doontaa runti dareemo sida inaad wax uun ka baraneyso intaan hadlayno.
Iibsashada Buugaag Badan
Haddii aad saacado ku qaadaneysid dukaanka buugaagta ee 'indie bookstore', oo ay ku jiraan buugaag gawaaridaada si aad ugu odorosto boostada gudaheeda, ama aad xilligan ku qanciso cinwaan loo diro akhristahaaga, malaha jimicsi ma dareemayo buugaag dheeri ah (oo aan waxbarasho la socon) dukaamaysiga buugaag cusub. Macno malahan inaad haysato yaraanta buugaagta aad baratid. Cunsurka lagama maarmaanka ahi waa inaad si cad u tahay akhriste, natiijada ka dhalatay akhristaha oo keliya ayaa lacag badan ku qarashgareyn doona buugaagta! Ka sokow, gabi ahaanba taasi waa cinwaanka laga yaabo inuu kaa jajabiyo waxbarashadaada, sax?
Ku Darsiga Cinwaannadaada Goodreads ama TBR List
Miisaaniyadda miyir-qabka ah, hab kale oo fiican oo runtii si akhris ah loo dareemo ayaa ah in lagu daro buugaag aad u tiro badan oo ku saabsan dijitaalkaaga TBR. Xitaa inkasta oo TBR-da aad hadda joogtaa ay kuugu dambayn doonto ugu yaraan saddex cimri (toban daraasaddaada hadda ah), waxay kaliya dareemeysaa inay habboon tahay in la ilaaliyo ebook kasta oo aad waligaa maqashay oo ah inaad u baahan tahay xiisaha aad u baahan tahay. ? Ha ka baqin, Buugga Riot wuxuu leeyahay liisas fara badan iyo dhacdooyin podcast ah oo kaa caawin doona inaad runti dareento sida inaad ku sii aaseyso TBR-da aan laga gudbi karin. Waqtiga aad kaliya ku darto ebook liiskaaga, in kasta oo, aadan xitaa maskaxda ku haynin inaadan dhab ahaan baranin wax ka dheer tweet maalmahan.
Sawir ahaan Laura Chouette on Aadaabta
Keenida Buug Meelkasta oo Aad Tagtid
Waxaa laguu go'aansaday inaad si dhab ah wax u barato, waxaadna fahamsan tahay talaabada koowaad inay tahay inaad markasta haysato ebook. Nasiib darrose, ma aadan helin tallaabo hore mid ka horreysa. Markaa waxaad sii wadi doontaa inaad buuggaas ku haysato boorsadaada, laga yaabee inaad xitaa dhigato miiska agtiisa ah. Runtii miyaanay fiicnayn in si fudud loo helo buug ebook ah? Waxay u egtahay inay u egtahay waxbarasho. Waxaa suurtagal ah inaad hesho cabsi aadna saddax buugaag ah u qaadatid joodariga - laga yaabee inaad mid walba qaabeyn doontid, ama laga yaabee inaad xitaa mid dhameysato oo aad mar kale rajeyneysid! Markaad seexanaysid jumlada hore, uguyaraan buugaagtan miiska sariirtaada dhinaceeda ayaa kadhigi doona fiiri sida aad baraneyso. Waxyaabaha gunnada ah, runti fur ebook-ka dhabtaada ka hor intaadan ka dooran taleefankaaga gacanta ogeysiiska ugu horreeya oo aad u rogto 45 daqiiqo.
Siinta Talooyinka Buugga
Ma jiraan wax la mid ah inaad shaqsiyaad kala duwan kala hadasho buugaagta si aad ugu ekaato inaad runti wax baratay. Hadday ahaan laheyd qof gaar u ah dadka aad jeceshahay iyo kooxda aad saaxiibka tihiin si aad u siisaan akhrinta ebook, qorista naqdiinta ebook, ama dhigista liisaska wadajirka ah, wax ka qorista buugaagta ma ku qanci kartaan inaad wax ku barateen waqti aan cayimin. mustaqbalka. Arrinta yaabka leh ayaa ah, wax ka qorista buugaagta inay dhab ahaan ahayd shaqo dheeri ah marka loo eego si fudud xulashada ebook waxay noqon kartaa…
Meelaynta iyo Qaadista Maktabaddu Way Qabtaa
Daalacashada buuggaaga maktabadda iyo dhigista xajmiga waxay isku darsameysaa raaxaysiga wax ku iibsiga khadka tooska ah miisaaniyadda-miyirka oo ay ku jiraan kabadhadaada 'Goodreads'! Dabcan, waqti aan la cayimin waqti ka mid ah mustaqbalka waxaad u baahan doontaa inaad xulato qabashadan. Markaad sameyso, waxaad si dhab ah u dareemi doontaa sida akhristaha. Yaa kale oo heli lahaa 14 buug oo laga soo xulo maktabadda iyada oo aan dib loo dhigin? Mar alla markii aad si xilkasnimo leh u celiso buugaag isku mid ah oo aan la furin dhawr toddobaad gudahood - si fiican, laga yaabee in taasi runtii u cuntami weyday inaan wax barto
Kuwani waa wax yar oo ka mid ah jawaabihii aan ka bixinnay "MA MA AKHRIN, laakiin DAREENO ayaa jecel in wax la akhriyo?" Maxaad adigu noqon kartaa Haddii aad dareentay in shaqsiyan lagu soo weeraray qoraalkan, ogow inaan marwalba lahadlayay naftayda waqtigan dhameystiran. Miyaan ku rogay iyada oo loo adeegsanayo twitter-ka 20 daqiiqo oo aan raadinayo tusaalaha saxda ah ee meeriskan iyada oo beddel u ah runtii barashada mid ka mid ah buugaag badan oo aan ka soo qaatay maktabadda? Haa. Laakiin miyaan bartay ebook ka dib? Maya maxaan dhihi karaa? Inta udhaxeysa iyadoo loo marayo buug-gacmeedka iyo qorista qoraalkan, waa hubaal dareemo sida aan wax u barto markaan hadlayno…
article PreviousIskuulka Waxbarshada ee Millikin wuxuu kudhawaaqayaa Fursada Ansixinta Waxbarashada Gaarka ah ee macalimiinta hada
Next articleTartanka Hobie TOC (KAYAK kalluumeysi 30k !!) Knoxville
Burushka ugu fiican ee loo yaqaan 'Acrylics' - ARTnews.com